?? ဟီးရိုးတွေက မကြီးရဲ့အိုက်တင်တွေကို အတုခိုးထားပါတယ်ဆိုတဲ့ စိုးမြတ်သူဇာ – Maythadin
?? ဟီးရိုးတွေက မကြီးရဲ့အိုက်တင်တွေကို အတုခိုးထားပါတယ်ဆိုတဲ့ စိုးမြတ်သူဇာ
သရုပ်ဆောင် စိုးမြတ်သူဇာ က ကိုဗစ်ကာလအစ ???? ???? ကတည်းကအိမ်မှာနေရင်း ဂိမ်းဆော့ပြီး နေ့တစ်နေ့တာကို ဖြတ်သန်းလျက်ရှိပါတယ်။ဂိမ်းကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးစွာ ဆော့လာခဲ့တဲ့ မကြီးစိုး( စိုးမြတ်သူဇာ) ကတော့သူဆော့ဖြစ်နေတဲ့ ?? ဂိမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး
အမြင်ကို သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်ကနေ “အခုတော့ မပြောပဲ မနေနိုင်လို့ ပြောလိုက်တော့မယ်။?? ကမကြီးကို ဂလိုရီ မရောက်အောင်ညစ်ထားပေမယ့် ဟီးရိုးတွေကတော့ မကြီးအိုက်တင်တွေကို အတုခိုးထား တယ်ဆိုတာလေ ပြောရင်လွန်မှာစိုးလို့ပုံနဲ့တကွ ယှဉ်ချ
ပြလိုက်ပြီ မယုံရင်ကြည့်လိုက်ကြ ပါကုန်။ပုံတိုင်းမှာ ??????? နဲ့သေချာဖတ်ကြည့်ဟိ (ငါ့တော့တရားမစွဲလောက်ဘူးထင်တာပဲ)”လို့ ဆိုပြီး ချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးကို စနောက်ရေးသားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အနုပညာဝါရင့်သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ စိုးမြတ်သူဇာ ကတော့
လတ်တလောကာလမှာ အလှူ တွေလုပ်ဖြစ်သလို အွန်လိုင်းကနေလည်း ???? လွှင့်ဈေးရောင်းခြင်းအလုပ်လုပ် ဖြစ်ကာ ယနေ တိုင်ပရိသတ်များရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကိုရရှိထားတဲ့ဝါရင့်အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
သရုပျဆောငျ စိုးမွတျသူဇာ က ကိုဗဈကာလအစ ???? ???? ကတညျးကအိမျမှာနရေငျး ဂိမျးဆော့ပွီး နတေ့ဈနတေ့ာကို ဖွတျသနျးလကျြရှိပါတယျ။ဂိမျးကိုခဈြခငျမွတျနိုးစှာ ဆော့လာခဲ့တဲ့ မကွီးစိုး( စိုးမွတျသူဇာ) ကတော့သူဆော့ဖွဈနတေဲ့ ?? ဂိမျးနဲ့ပတျသကျပွီး
အမွငျကို သူ့ရဲ့လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာပျေါကနေ “အခုတော့ မပွောပဲ မနနေိုငျလို့ ပွောလိုကျတော့မယျ။?? ကမကွီးကို ဂလိုရီ မရောကျအောငျညဈထားပမေယျ့ ဟီးရိုးတှကေတော့ မကွီးအိုကျတငျတှကေို အတုခိုးထား တယျဆိုတာလေ ပွောရငျလှနျမှာစိုးလို့ပုံနဲ့တကှ ယှဉျခြ
ပွလိုကျပွီ မယုံရငျကွညျ့လိုကျကွ ပါကုနျ။ပုံတိုငျးမှာ ??????? နဲ့သခြောဖတျကွညျ့ဟိ (ငါ့တော့တရားမစှဲလောကျဘူးထငျတာပဲ)”လို့ ဆိုပွီး ခဈြတဲ့ပရိသတျကွီးကို စနောကျရေးသားပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။အနုပညာဝါရငျ့သရုပျဆောငျတဈဦးဖွဈတဲ့ စိုးမွတျသူဇာ ကတော့
လတျတလောကာလမှာ အလှူ တှလေုပျဖွဈသလို အှနျလိုငျးကနလေညျး ???? လှငျ့ဈေးရောငျးခွငျးအလုပျလုပျ ဖွဈကာ ယနေ တိုငျပရိသတျမြားရဲ့ အားပေးခဈြခငျမှုကိုရရှိထားတဲ့ဝါရငျ့အနုပညာရှငျတဈဦးဖွဈပါတယျ။
Stay Home ဘယ်ကစသလဲဆိုတာကို အသေအချာရှင်းပြလိုက်​သော ကိုပေါက်နဲ့ ကျော်ကျော်ဗိုလ်တို့ရဲ့ အခွီဗီဒီယို